व्यवसायीलाई ६ महिनासम्म भाडामा ५० प्रतिशत छुट - Arthatantra.com
व्यवसायीलाई ६ महिनासम्म भाडामा ५० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई घरबेटीले भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिएका छन् । ठमेल क्षेत्रका करिब २ सय घरबेटीले ५० प्रतिशत रकम घर भाडामा छुट दिइसकेको ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का उपाध्यक्ष भविश्वर शर्माले जानकारी दिए ।
व्यवसायीले १ वर्षसम्म घर भाडामा छुट दिन घरबेटीलाई आग्रह गरेकोमा ६ महिनासम्म छुट दिने सहमति भएको हो । ठमेल पर्यटन परिषद्का पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार रामशरण थपलियाले ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म छुट दिन घरबेटी सकारात्मक रहेको बताए । “हामीले एक वर्षसम्मलाई छुट दिन आग्रह गरेका छौं ।
६ महिनासम्मलाई ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा केही घरबेटीहरूले गर्नुभएको छ” उनले भने । ठमेल क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका ११ वटा व्यवसायी संस्थाहरूले एक वर्षसम्म घरभाडामा ५० प्रतिशत छुट दिन घरबेटीलाई आह्वान गरेका थिए ।
५० प्रतिशत नै छुट दिने विषयमा औपचारिक रूपमा सहमति नभए पनि ७० प्रतिशत घरबेटी छुट दिन तयार रहेको उपाध्यक्ष शर्माले बताए ।
“व्यवसायी र घरबेटीबीच भाडा छुट दिने विषयमा औपचारिक सहमति भइसकेको छैन तर ७० प्रतिशत घरबेटी ५० प्रतिशत भाडा छुट दिन तयार हुनुभएको छ,” उनले भने । तर, २ सय घरबेटीले भाडा छुट दिइसकेको उनले बताए ।
पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब ५ हजार व्यवसाय ठमेल क्षेत्रमा रहेको अनुमान गरिएको छ । ठमेल क्षेत्रमा न्यूनतम ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म मासिक भाडा तिर्दै आएको थपलियाले बताए । -बाह्रखरी अनलाइनबाट
वि.सं.२०७७ असार ९ मंगलवार १३:१० मा प्रकाशित
अघिल्लाे कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर कहिले आउँछ ? के दोस्रो लहर पनि पहिलोजस्तै हुन्छ ?
पछिल्लाे कोरोनाको औषधी भन्दै रामदेवले ल्याए ‘कोरोनिल’ : ७ दिनमा शतप्रतिशत बिरामीलाई निको पार्ने दाबी